Ọrụ nke geotechnologies na nhazi nke 3D Cadastre - Geofumadas
Ọrụ nke geotechnologies na conformation nke 3D Cadastre
Disemba, 2018 cadastre, Akụziri CAD / GIS
Na Thursday November 29, dị ka Geofumadas na ndị bịara 297 anyị na-abuana na webinar nke kwalitere UNIGIS n'okpuru isiokwu: "Ọrụ nke geotechnologies na conformation nke 3D Cadastre»Site na Diego Erba, onye kọwara mmekọrịta dị mkpa n'etiti geotechnologies na 3D cadastre. Lau, onye na-emekọ ihe ọnụ na Geofumadas kpuchitere edemede ahụ, onye anyị na ya nọ n'ehihie anyị tụlere echiche ya, nchọta ya yana nyocha ọdịnaya n'ihi UNIGIS O kwuwo ya maka ndi choro ya.
Ige ntị na Erba chọrọ uche ghere oghe maka ọhụụ nke ngwa ngwa dị na mba ndị mepere emepe, yana ọhụhụ oge dị mkpirikpi na mba ndị nkwupụta a nke Cadastre 2034 anaghị anọchite egwu nke ihe enwere ike ịme; kama ọ bụ n'ihi itinye aka na njikwa mgbanwe, mkpebi na akụnụba metụtara ọnọdụ ebe ụgwọ maka nsonaazụ n'ebe nwa amaala nọ dị elu maka ịnye ọrụ ka mma dabere na data mpaghara. Onye ọrụ m, Lau bụ ezigbo ọkachamara na ichikota ọdịnaya nke Webinar; Ihe m kwuru pụtara dị ka nchịkọta akụkọ nke Geofumadas.com na agba aja aja.
E mepụtara webinar dabere na ọdịnaya nke akwụkwọ ahụ Ihe ngosi kachasị mma - 3D CadastresO wee malite na-akọwa, ka ịme ngosi uwe 3D nwere ike melite ala ahụ ka ọ na-agụnye a siri ike na nkà na ụzụ mgbanwe na-enye ohere maka oghere ịme technology nke na-akwalite mmepe, a nile n'elegharaghị niile àgwà si 2D data (map, akwụkwọ ozi, atụmatụ).
Erba, kwusiri ike na usoro nchịkọta data ga-adị mfe site na ngwanrọ free dị ka Ncha, nke bụ ngwa ebumnuche e kere iji weghachite data na data a na-echekwa na weebụ, na-ahapụ iwe iji akwụkwọ dị ka usoro nchịkọta nke archaic.
Nnukwu ihe ịma aka, maka ndị na-eme mkpebi. N'ezie, site na agụmakwụkwọ na ọhụụ bụ ụzọ dị mma. Agbanyeghị, mgbe anyị hụrụ ahụmịhe dị ka Multipurpose Cadastre nke Colombia, ebe Trimble bịara na Land Folio na PenMap ya magburu onwe ya, anyị ga-abịa na nkwubi okwu na njikọta yana ọkụ eletrik na-adịgide adịgide n'ime ime obodo ka bụ ihe ịma aka dị anya. Nchekwa weebụ ka ga-enweta ụdị ngwakọ n'etiti owuwe ihe ubi, mmekọrịta, na ọbụna ụfọdụ akwụkwọ.
The obibia ga-atụle-ewere n'ime akaụntụ na ọ bụ ezie na nkà na ụzụ anyị ka nọ a mgbanwe na-adọ n'etiti 3D ngosi na 5D ọrụ, nnukwu obodo na Latin America na-oké mkpa ịmụta usoro ụwa nke mbụ, ha ga-abụ ezi omume maka ụzọ nke obodo ukwu.
Ọ gara n'ihu na-egosi na anyị kwesịrị ịna-eche ihe a ịme ngosi uwe 3D ọ bụghị naanị site na nkà na ụzụ mgbanwe ọchịchị, ma site eziokwu nke ohere choro, site na nke a ọ bụ omume na mma ịme ngosi uwe nke gbasara ohere-bughi Ọnọdụ. Site otu ihe atụ, i nwere ike iji anya nke uche ọrụ nke ịme ngosi uwe 3D na oghom omume ndị dị otú ahụ dị ka ala ọma jijiji na ike gbakọọ Ndahie nke owuwu na-akwanyere n'ala ma n'ala Ndahie na okwu nke owuwu.
O gosiputara omumu sayensi nke a na-eme n'uwa zuru oke, nke sitere na 2011 kwalite iji 3D eme ihe ngosi maka nyocha ihe omimi, yana ndi na-ege nti ka ha mepee oru ndi gbasara isiokwu a, karia na Latin America.
Njikọ nkà na ụzụ
Iji ghọta technology nke na-agụnye ịme ngosi uwe 3D, dị ka ala, ọ dị mkpa iji zaa ajụjụ nke otú a onwunwe na-aha na 3D? Maara na unit mbụ metụtara na ala eji polygon mgbe niile, otú ị pụrụ aha a onwunwe na 3D na uru nwere ha nwetara na omenala cadastre.
Ọfọn, na mbụ, a pụrụ iji teknụzụ 3D mee ihe iji jikwaa oghere, ya bụ, iji kọwaa ọdịdị ha, olu na ọnọdụ, yana ụdị elu ebe ha dị.
Iji oge a na n'ime ime obodo N'ịchọpụta bụ omume na-weghara elu mpịakọta nke data, gụnyere data ọgbọ, dị ka ígwé ojii ihe ma ọ bụ isi ígwé ojii, dị oké mkpa maka iwuli akpọkwa 3D ụgbọala mmepe nke gbasara ohere ọdụ data.
Geomatics na mba ndị na-emepe emepe ga-enwerịrị ụzọ dị ka ndị a, nke, dịka m kwuru n'elu, bụ ọhụụ na enweghị ike ịgbanwe agbanwe. Dika ihe ndia putara, odi nkpa ka esi isi nosisi ike; n'ihi na ọ bụ ezie na akụrụngwa akụrụngwa enweela ọganihu, arụmọrụ nke ngwanrọ ahụ maka mgbanwe ha, na njikwa azụmahịa na traktị na-eso ya na ozi gara aga nwere oke. Ọ bụrụ na ịnakwere ọkọlọtọ ISO-19152 ka bụ ihe ịma aka dị mgbagwoju anya, n'etiti ịgbada ụdị echiche dị na usoro anụ ahụ, yana klaasị topographic dabere na isi dị ka ngalaba nchekwa metadata; A ga-eche n'echiche ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịga maka ịme ngosipụta akụkụ atọ (ọ bụghị site na nhụ anya, ma ọ bụ ijide, kama site na nchịkwa nchịkwa).
Echere m na nsogbu ahụ abụghị n'ịbido ọhụụ ọhụrụ. Institutionslọ ọrụ niile nwere ọkachamara mmadụ pụrụ iche, ọkachasị n'ihe gbasara nyocha ozi na mmepe teknụzụ; Mana ihe isi ike dị na ijikọta usoro ndị ozi ala ọzọ nke na-abụghị naanị na-elekwasị anya na usoro nnweta data, mana chọrọ nrube isi nke eziokwu data ọhụrụ a, ọnọdụ na ntozu ntozu maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ ga-eji ozi ahụ, usoro nke mmelite n'okpuru njikwa azụmahịa, yana ịkọwa usoro mmụta maka ndị na-eme ihe nkiri ga-esonye n'inye ndị amaala ọrụ.
Ndị anyị bụ ndị mejuputara usoro agbakwunyere n'etiti Cadastre na ndekọ ahụ maara maka nsogbu ịma aka mgbanwe nke gụnyere gụnyere na ntozu nke onye na-edeba aha, iji lee maapụ na onye na-ekiri weebụ, nke na-enweghịzị mpaghara ndị agbata obi akọwapụtara na ederede, dị ka ha dị a na-ahụ anya na nkọwapụta nkọwapụta dị ike nke map cadastral na, nke gosikwara mmachi sitere na iwu ọchịchị pụrụ iche sitere na iwu mpaghara. Ugbu a were ya na kama ịnwe ụgbọ elu 2D, ị ga-ahụ ọnya nwere akụkụ atọ yana ụlọ ọkara gbazee na mbọ kacha mma nke Drone2Map ma ọ bụ ContextCapture.
Na webinar metụrụ na tupu ekwurịta mmejuputa nkewa 3D n'ụwa nile, ọ dị mkpa iji tinye ihe kwesịrị ekwesị teknụzụ n'ịwa ụdị nke onodi ohere, dị ka bụ geoid, dị ka ndị a na-mkpa na-ewu ma na-akwado ụdị ndị a gbanwere na eziokwu ahụ. Ntughari nke ihe omuma a na otutu mba bu ihe nil, nke bu nsogbu siri ike mgbe ichoputa ihe omuma ihe ndi ozo, nke di elu.
A gaghị ahapụ akụkụ ikpe ahụ, ebe ọ maara na cadastre dị otú a gụnyere iwu - akụ na ụba na nke anụ ahụ. Dabere na iwu kpuchie metụtara na ala ọ bụla obodo, ụzọ nke ụlọ ndị ahụ na oghere na-emeso na-ekpebisi ike, ọ na-atụle ikpe Colombia-Brazil, bụ ebe e nwere a ire nke ndị ziri ezi nke ụlọ oghere bụghị wuru (red ebe) .
Ya mere, ihe na-eji ala 3D, nakwa dị ka olu data ẹdude, ga-abụ bara uru n'ihi na ihe ha na-akpọ web nzukọ ọmụmụ dị ka "overlapping ọnọdụ", ya bụ, na-edozi nsogbu ndị metụtara mgbochi, vetikal machite (metụtara ụlọ) ma ọ bụ akụrụngwa (ọjà, Gịnị, ọkpọkọ ma ọ bụ tunnels).
Malite site na ụlọ abụọ:
Nnweta: nke ahụ bụ, ihe dị, ihe dị, ebe ọ bụ otú o si ele anya.
Ihe okike: mepụta data site na teknụzụ dị ka BIM, ma meepụta ụdị ngosi 3D, nke ga-emesị gaa site na nsụgharị nke na-enye ihe ahụ ọ dị n'ezie.
Nso idi ọmịiko ị na-esi ọnwụ ọzọ; enweghị njedebe nchịkwa nke nlekọta ala, mana na oge ikpeazụ nke imelite ma jikọta ọrụ nye ndị na-eme ihe nkiri jikọtara ọnụahịa azụmahịa.
Onyinye na geoengineering
N'oge ngosi, Erba gosiri ihe atụ nke otú ha na e ji ndị 3D ụdị nke ụfọdụ bụ isi ọrụ akụkụ, a na-egosi na ndị a na ụdị na-anọchi anya a na ngwá ọrụ mkpebi, ebe ọ bụ akụkụ nke ihe dị, ya bụ, egosipụta n'ebe ahụ, bụ ebe e nwere ka ọ dị, nke a pụrụ ịbụ amalite anwansi na-eji nke a data iji gbochie ụdị ọ bụla nke ebughi omume.
Enwere ike ịgbanwe ihe nchịkọta ihe nchịkọta nke ihe nchịkọta ka ọ bụrụ ihe, nsonye nke echiche ahụ amalite Nke al, ihe dịka okara pixel, ma na ihe 3D, "ọ bụ ngalaba kachasị n'usoro nke matrix atọ". Ebumnuche nke 3D cadastre akụ na ụba na-ebutekwa, site na nke mebere ma ọ bụ Atụmatụ Echiche, nke bu ihe nkoghari nke etinyere ala n'onodu di iche, iji choputa ufodu di iche iche dika uzo ya na mmekorita ya na gburugburu ebe obibi.
Kedu ihe nwere ike ime na Geographic Information Systems, yana gburugburu usoro nke usoro e kere maka nyocha gbasara ohere gbasara mbara igwe? na-egosi na ọ bụ njedebe nke vector data dị ka a maara, ya bụ, ọ bụ "Njedebe nke polygon" dịka ntọala maka njikọ nke data jikọtara na cadastre", Nke na-egosi na a ga-atụle ụzọ ha si enweta, arụpụta ma nyochaa.
Tinyere anya na aghụghọ 3D data bụ adịghị anya site eziokwu, ngwa dị ka ArcGIS Pro ESRI, DigitalTwins Bentley Systems gụnyere na ha functionalities interface na-akwanyere ndị a data, QGIS nwekwara e tinyere tinye-ons na-ejizi data elu igwe, ya mere, ọ na - ewepụta amaghi ama banyere ihe ga - eme na GIS dị na ngwa ndị ọzọ maka nyocha gbasara ohere gbasara mbara igwe, ebe ọ bụ na mmelite ahụ ga - adị na mmepe teknụzụ dị nso, anyị ga - ahụ n'ime afọ ole na ole, ọ bụrụ na enwere mgbanwe nke ngwanrọ n'efu nye ohere ka ị nweta ọtụtụ arụmọrụ maka ime ihe data 3D.
The ajụjụ anyị ga-ajụ bụ ma anyị na mba na-arụ ọrụ aka na aka na nkà na ụzụ ọganihu, mmepe nke SmartCities bụ a eziokwu na dị gburugburu akuku, ma na-achọ ukwuu mgbalị nke nkà na ụzụ mwekota, si ịme ngosi uwe 3D na mmekọrịta ọtụtụ ẹdude sensọ, plus echiche nke IoT - Internet nke ihe, na nnyefe nke data site na igwe-oji, ọ bụ ihe na-agbanwe obodo na ala, na-eduga ha ka ha bụrụ smart obodo smart ala.
Nke a webinar bụ ezi-akpali, na-atụle mkpa nke BIM-ịme ngosi uwe 3D- data ojii-sensọ maka geo-engineering, na-maka ndị na-akpụ akpụ n'ime ndị njikwa ọmụma dị otú ahụ.
N'aka nke m, nsọpụrụ m nye Diego Erba, maka nkwusa ike ya nke enweghị ọhụụ na-adịghị anya ozugbo. Ihe ikwughi banyere obi uto ya na ike ya nke ikwuputa ihe anwuru anwuru na nke kachasi nma maka ndi mmadu.
UNIGIS, na-enweghị ike inweta onyinye a na-apụghị ịgbagha agbagha Master Degree Online na Geographic Information SystemsSite na webinars ndị a ị na-akwado nguzobe nke obodo nwere agụụ maka ọdịnaya na-agbakwunye uru na mpaghara ahụ. Agbanyeghi na onu ogugu di oyi, ndi Kolombia 95, ndi Argentine iri ato na ato, ndi Mexico 37 na ndi Ecuadori 35 sochiri uzo ato n’ime ndi webusaiti a.
Na-eche maka nke na-esote.
Ị pụghị ịga na #Webinar nke #UNIGIS na Diego Erba? Nke a bụ njikọ ya na ndekọ dị mkpirikpi iji hụ ntinye ederede: https://attendee.gotowebinar.com/register/7579969785221365507
Next Post Leica Airborne CityMapper - ihe ngwọta na-adọrọ mmasị maka eserese obodoNext »